Xildhibaan Guurti Ah Oo Ka Dareen Celiyey Baaqii Nabada Ee Madaxweynaha Puntland | Himilo Media Group
Hargeysa, 19 August, 2019 (Himilo)-Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan (Indho-Indho), oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Guurtida ee dhalasho ahaan ka soo jeeda Gobolka Sool ayaa ka dareen celiyey baaq nabadeed oo uu xalay Somaliland ugu baaqay Madaxweynaha Maamul Gobolleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Xildhibaan Cabdiqaadir (Indho-Indho) oo shalay u warramayey HCTV ayaa ugu horreyn si diiran u soo dhaweeyey baaqaasi nabadeed waxase uu dareen ka muujiyey wada hadalka Somaliland iyo Puntland ee uu Madaxweynahaasi ku baaqay.
Xildhibaanka arrintaasi ka hadlayaana waxa uu yidhi, “Nabadgelyada uu ku baaqay Madaxweynaha Maamul gobolleedka Soomaaliyeed ee Puntland Nabadgalyadeeda aad ayaan u soo dhaweynayaa oo cid diidi kartaana ma jirto, Annagu dhinacayaga diyaar ayaanu u nahay wax kasta oo nabadgelyo lagu heli karayo, waliba waxaanu jecel nahay oo aanu ka caawino oo aanu iskaashi ka yeelano maaddaama oo ay colaadu ku badan tahay dhulkooda”. Xildhibaan Cabdiqaadir Indho-Indho waxa kale oo uu intaasi ku daray, “Ciidankayagu waa heegan oo iyaga ayuun baa meelahaasi ka eegeegaa oo waa uu shaqo la’yahay”.
Xildhibaan Indho-Indho waxa kale oo uu dareen ka muujiyey wada hadalka uu ku baaqay Siciid Danni, “Wadda hadalka uu ku baaqay waxaan leeyahay wax baa ku jira, waxaananu jecel nahay Walaalahayaga Puntland inay isku diyaariyaan sidii ay Soomaalidii Talyaanigu xukumi jiray oo baaba ah u xukumi lahaayeen, Annaga Gobolladayada iyo Xudduudahayagu wax laga wada hadlayo maaha”.
Xildhibaanku waxa kale oo muranka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland, “Waxaan leeyahay labadan Gobol ee ay ku muransan yihiin ee ay leeyihiin isku qabiil baanu nahay ee ay ku dhegdhegayaan inay ka waantoobaan oo ay mideeyaan Gaalkacayo”.